ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ကော်ပီကက်
ဇီးကွက်လန့် သွားပုံကို ကြိုက်တယ်လို့ ပြောပေးပါ။
so smart girl :D
ကိုပေါ သမီးရဲ. Animation လေးတွေက very cute --
" ဖအေလုပ်သူ ဒီလောက် တည်တည်တံ့တံ့နေတဲ့ ကြားက " ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ကိုဖတ်ပြီး ပြုံးမိပါတယ် -----
သမီး အိုင်ဒီယာလေးတွေ ကောင်းတယ်။
တည်တည်တံ့တံ့နေတဲ့ ဖအေတူလို့ထင်ရဲ့ :P
တော်လိုက်တဲ့ သမီးလေး... အဖေနဲ့ တခြားစီ..ဟီး
ရေစက်ကျလို့ ဇီးကွက်လန့်သွားတာ ရီလိုက်ရတာ..
အဖေ့ပုံကတော့ မျက်နှာကြီး နီပြီး ကြောက်စရာ..။ :)
သမီးက တော်လိုက်တာ... ဒီလို ဥာဏ်လေးရှိဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ဘူးနော်... ခုနလေးတင် သူငယ်ချင်းသမီးလေးစကားပြောတာ သမီးလေးမိုးသီရိနဲ့ တူလိုက်တာလို့ ပြောမိသေးတယ်... မမလေးထွင်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ သားကိုပြဦးမယ်... သမီးက အဖေထက်ပိုထက်မယ်ထင်တယ်... ဟိုတနေ့ က မဒမ်ပေါရဲ့ ခိုလေးကို သားကိုပြတော့ ဘေးကကိုပေါလက်ရာ ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူကို ကြည့်ပြီး သားကမေးတယ်.... "who is she?"တဲ့... ကိုပေါရေ... ကိုပေါပုံလေးကဆံပင်လေးနဲနဲရှည်နေလို့ ထင်ပါရဲ့...
နောက်ခံပြောင်းလိုက်တယ်၊ တနေ့၁ပုစ်လောက် တင်နေတယ်၊ ဟိုတလောက အတော်ကြာပျောက်နေတာ၊ အလုပ်နားလိုက်လို့လား ဟုတွေးမိပြန်ချေ၏
ဖအေလုပ်သူ ဒီလောက် တည်တည်တံ့တံ့နေတဲ့ ကြားက အတတ်ကောင်းတွေ တတ်လာတယ်။ ဧကန္တတော့ ငယ်ငယ်က တွန်မ် နဲ့ ဂျယ်ရီ တွေ အကြည့်များပြီး အတုမြင် အတတ်သင်လာတာပဲဖြစ်ရမယ်။
သမီးက very smart ပါပဲလား။ ဒီအရွယ်နဲ့ ဒီလောက်တွေးနိူင်တာ အံ့သြနေတယ်။
အဖေပုံကတော့ အဖေနဲ့ စိတ်ကောက်နေတုံး ဆွဲသလားပဲ။
ဇီးကွက် လန့်သွားတဲ့ပုံ အကြိုက်ဆုံး...း))
ဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ အဲ့င်္ဇီးကွက် လန့်သွားတဲ့ပုံက အန်တီသက်ဝေ လန့်ပုံနဲ့ တစ်ပုံစံတည်းကိုး .... ဟိဟိ။
After i have read the above article, I wnat to put comment on Khit Pyaing Web but I have huge concern for NLS.I am sorry to put on your blog as I think you may have same concern.PS
It's not wise to put the blogger in this situation after the writer have use his information. You can see his sacrifices after his effort. I don't understand why the writer try put him in the jail as Nay Phone Latt by claiming that the blogger may have known the bomb blast in advance and he can have 24 hr electricity.
What if he get problem, the people of Myanmar would lose the real good citizen again like Nay Phone , Gaganar,etc. Then the writer may write the article of him just to make money....whatashame of exile journalist. Khit Pyaing should not have published have more sense and should have protect the good people of Mayanmar.
>>>ashley..... I agree with you.